Ngaba ndinokukhawuleza ukuphucula iAnglish yam uluhlu lwamagama angundoqo ndizitshintshe kwizinto eziphambili?
Ukuba ufuna ukuzimisela ukuba uphumelele, kufuneka ubeke kwaye ulungiselele uluhlu lwakho lwe-Amazon ngokubhekiselele kumagama aphambili ekujoliswe kuwo (i. e. , loo magama angatshatanga kunye kunye kunye nomsila omade osetyenziselwa ukukhangela imveliso kaninzi). Kodwa indlela yokufumana amagama angundoqo kunye nokwenza ngcono i-Amazon ibonise indlela engcono ngayo? Le nto yinto enjenge-Search Engine Optimization (SEO), ukulungiselela uluhlu lwakho lwe-Amazon kufuneka ukhethe amagama angundoqo kwiimfuno eziphambili zokukhangela (i. e. , ivolumu enkulu yosesho), ngokuhambelana nenqanaba elaneleyo lokuncintisana kwegama elingundoqo (i. e. , kulula ukuluhlula). Yingakho ngaphambi kokuba nantoni na kuya kufuneka ukhethe ithuluzi legama elingundoqo. Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa amacebo athile ukuba ulungiselele uluhlu lwama-Amazon lwamagama angundoqo kunye nokusebenzisa isisombululo esifanelekileyo ngokusebenza kakuhle. Ngoko, makhe sicinge!
Qala nge-Google Keyword Planner
Ngokukodwa, eli sixhobo lokusisigxina legama elingundoqo liyazi kakuhle phantse zonke ii-SEO zengcali zinokukunceda kakhulu ukulungisa i-Amazon amagama angundoqo. Ukuze uchaneke ngakumbi, ndincoma usebenzisa i-Google Wordwordner Planner ngaphambi kokuba nantoni na enye-ukuze ube nomfanekiso omkhulu wegama lakho lemveliso elijoliswe kuyo kunye nemigca yokukhangela imilenze ende.Ngale ndlela, uya kukwazi ukuqonda zonke iindlela zokusetyenziswa kwazo - kungekhona kuphela kwi-Amazon ngokwayo, kodwa ngezinye iindawo zokuthengisa, ezifana ne-eBay, iWalmart, i-Alibaba esitolo, njl njl.
Ukuphucula i-Amazon Listing Usebenzisa ithuluzi lobugcisa
Emva kokuba unomfanekiso omkhulu wegama lakho eliphambili elijoliswe kuyo, lixesha lokubavavanya kwisenzo. Ndiyathetha apha uza kufuneka ukhethe ithuluzi elifanelekileyo lophando lwegama eliphambili lenzelwe ukulungiswa kwee-Amazon. Phakathi kwabanye, ndinokucebisa ukusebenzisa ezi zilandelayo - Igama elingundoqo elithiTool. Io kunye neJungleScout. Ndiye ndavavanya kubo bobabini ukulungiselela uluhlu lwama-Amazon lwamaziko aphambili ekujoliswe kuwo. Ngezantsi sibe nomboniso omfutshane ngamnye wabo.
Igama elingundoqo elithiTool. Io
Isixhobo esikhulu sokuqhubeka nokuhamba kunye neminye imibono ebalulekileyo yegama elingundoqo. Ngokufana ne-Google Keyword Planner, konke okufunekayo kukufaka igama lakho eliphambili elijoliswe kuyo - kwaye uncediswe uluhlu olukhulu lwemigqaliselo yokukhangela esetyenziswe ngabathengi abaphilayo abafuna into efanayo okanye uhlobo lomkhiqizo. Yintoni enye - igama elingundoqo elithiTool. Io ibonakala inkulu kakhulu, ingakumbi xa kufikeleleka ekufumaneni idibaniso yegama eliphambili elinelona elilindelekileyo.Khumbula, ukukhethwa kwe-autocomplete ka-Amazon akunakukukunceda ngonaphakade ngamazwi, yingakho usebenzisa le thuluzi lokuphanda ngegama elingundoqo lingaba usindiso lwangempela kumthengisi wokuqala kwi-Amazon.
Kwaye apha ekugqibeleni siza kwinqanaba - into leyo ayiyiyo i-Keyword Planner, okanye i-KeywordTool ngokwenene inceda ukuqonda mhlawumbi into ebaluleke ngaphezu kwayo ziyakwazi ukuvelisa ngokuthengisa ngakumbi kwi-Amazon. Yingakho ndincoma ukusebenzisa i-JungleScout ukufumanisa indlela ukuphumelela ngayo amagama athile athile okujoliswe kuwo, okanye ibinzana elinomsila onokuthi. Okanye ungayisebenzisa nje ngokubhekiselele kwi-cross-reference. Ekugqibeleni, ukwenza ukuhlolwa kokugqibela kwegama elingundoqo elilindelekileyo kwaye unokuqiniseka ukuba ngaba unomdla wokuba ufanele ukulungiselela uluhlu lwakho lwe-Amazon ngokuqinisekileyo, okanye kungekho konke Source .